Umthetho wabucala - InstaZOOM
Ikhaya » Policy Protection Data
Sibuxabisile ubumfihlo bakho. Ukuze ukhusele ukungaziwa kwakho, singathanda ukukwazisa malunga nolwazi lwethu lwe-intanethi kunye nokukhetha onakho malunga nokuqokelela kunye nokusetyenziswa kwedatha yakho. Senza esi saziso sifumaneke kwiwebhusayithi yethu nakwiindawo zonke apho idatha yobuqu inokucelwa khona ukuze kube lula ukuyifumana.
I-Google Adsense kunye ne-DoubleClick DART cookies
Le webhusayithi isebenzisa iikuki ezisuka kuGoogle, umntu wesithathu obonelela ngentengiso, ukunikezela ngeentengiso. UGoogle usebenzisa iikuki ze-DART ukuhambisa iintengiso kubantu abandwendwela le webhusayithi kunye nezinye iiwebhusayithi kwi-Intanethi.
Ungaluvala usetyenziso lweekuki ze-DART ngokuya kule dilesi ilandelayo: http://www.google.com/privacy_ads.html. Iintshukumo zabasebenzisi zilandelwa ngeekuki ze-DART, eziphantsi komgaqo-nkqubo wabucala kaGoogle.
Iikuki zisetyenziswa ziiseva zentengiso yomntu wesithathu okanye iinethiwekhi zentengiso ukuqokelela ulwazi malunga nemisebenzi yabasebenzisi kule webhusayithi, umz. B. Bangaphi abantu abandwendwele iwebhusayithi yakho kunye nokuba bazibonile iintengiso ezifanelekileyo. Instazoom.mobi ayikwazi ukufikelela okanye ukulawula ezi cookies, ezinokusetyenziswa liqela lesithathu.
Ulwazi lomntu siqu luyaqokelelwa.
Ukuba wena instazoom.mobi ndwendwela, idilesi ye-IP yewebhusayithi kunye nomhla kunye nexesha lokufikelela zirekhodwa. Olu lwazi lusetyenziselwa ukuhlalutya iipateni, ukulawula iwebhusayithi, ukulandelela iintshukumo zabasebenzisi kunye nokuqokelela idatha yedemographic ngokubanzi yokusetyenziswa kwangaphakathi. Okona kubaluleke kakhulu, iidilesi ze-IP ezirekhodiweyo azidityaniswanga nolwazi lomntu.
Iikhonkco kwiiwebhusayithi zangaphandle
Sinikeze amakhonkco kule webhusayithi ukwenzela ukuba kube lula kunye nereferensi. Asinaxanduva ngemigaqo-nkqubo yabucala yezi webhusayithi. Kuya kufuneka wazi ukuba imigaqo-nkqubo yabucala yezi webhusayithi inokwahluka kweyethu.
Le ngxelo inokuhlaziywa nangaliphi na ixesha ngokubona kwethu. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga nomgaqo-nkqubo wabucala we instazoom.mobi nceda uqhagamshelane nathi ku [imeyile ikhuselwe]